Daahir PS oo ka garaabay gafkii uu gabdhaha kula kacay | KEYDMEDIA ONLINE
Daahir PS oo ka garaabay gafkii uu gabdhaha kula kacay
Taliyaha booliska Qeybta Saybiyaano Daahir PS, ayaa raalli galin ka bixiyay falkii xarigga iyo argagax galinta ahaa ee uu 25 Dec 2020, kula kacay saddex gabdhood oo bannaanbax nabadeed ku dhigayay Isgoyska Banaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Daahir PS, ayaa galabta u hoyday, gabdhihii wax kala gaareen, kuwaas oo ka tirsan Xisbiga Mucaaradka ah ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
War ka soo baxay Xisbiga Wadajir ayaa lagu yiri, “Taliyihii Qaybta Seey Biyaano oo 25 Dec 2020, rasaaseeyay hablo ka tirsan Xisbiga Wadajir oo mudaharaad nabadeed dhigayey, ayaa maanta cudurdaar bixiyey, cafisna waydiistay Deeqa Soomaali iyo Nasteexo Isxaaq”.
Daahir, oo ka soo muuqday muuqaal gaaban ayaa isna yiri “Waxaan joogaa guriga xisbiga Wadajir oo ay ku sugan yihiin gabdhihii ay wax-na-kala gaareen, si shakhsi ah ay aniga wax iga gaareen, iyagoo ku bannan-baxayaa Isgoyska Banaadir, arrintaas oo si qalad ah aniga iiga dhacday, ayaan waxaan ka dalbaday cafis, waana i cafiyeen” .
Deeqo Soomaali oo ka mid ah Saddexda hablood ee dhibka loo geystay ayaa iyana tiri, “Waxaa maanta cafis dalbasho iyo Cudur-daar noogu yimid, Taliyihi Seybiyaano oo ahaa askarigii 25 Dec 2020 nagu xabadeeyay isgoyska Banaadir, aniga iyo dhallinayaro kale oo si nabbad ah u Bannaan-bexeyno, waxaan cadaynaya in ILAAHEY hortiisa iyo ummadda Soomaaliyeed horteedaba aan ku cafiyay, dhallinyaradi kale ee dulmiga nagu wada dhacayna waxaan ka rajeynaya in ay ku cafiyaan.